I-Oktoberfest enkulu kunazo zonke emhlabeni: Iinqwelomoya zaseLufthansa ezinabasebenzi abakhulu beTrachten lonke ixesha Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Oktoberfest enkulu kwihlabathi: Iinqwelomoya zaseLufthansa ezinabasebenzi abakhulu beTrachten ngalo lonke ixesha
I-Oktoberfest enkulu kwihlabathi: Iinqwelomoya zaseLufthansa ezinabasebenzi abakhulu beTrachten ngalo lonke ixesha
Ngexesha nje le-Oktoberfest eMunich, LufthansaItraki yomsebenzi ilungiselela ukusuka. Kulo nyaka, elona qela likhulu labadlali besinxibo sabantu liya kuthatha indawo ephambili kwiflegi yaseLufthansa Airbus A380 okokuqala. Bebonke abagcini beenqwelomoya abangama-21 baseLufthansa baya kuthengisa iyunifomu yabo ngesinxibo sendabuko saseBavaria. Inqwelomoya yokuqala eLufthansa 'Trachten' izakusuka eMunich nge-23 kaSeptemba isinge eBeijing ngelixa uhambo lwenqwelomoya nge-3 ka-Okthobha luzakusuka eMunich luse eLos Angeles. Ukongeza koku, abasebenzi abakhethiweyo beendlela zaseYurophu nabo baya kuthatha iimpahla zesintu.
Abasebenzi baseLufthansa abanxibe iimpahla zemveli zaseBavaria
Izinxibo zemveli ezinxitywa ngabasebenzi beLufthansa abasebenza ixesha elide zayilwa zalungiswa ngu-Angermaier, ingcali esekwe eMunich yengubo zemveli zaseBavaria. Iingubo ezingcolileyo zabafazi beenqwelomoya zokuhamba ngenqwelomoya zimnyama ziluhlaza kunye neefaskoti ezingwevu zesilivere, ngelixa amadoda azakube enxibe i-lederhosen emfutshane eneevesti ezimnyama eziluhlaza ezenziwe ngezinto ezifanayo nezingcolileyo. Njengakwiminyaka edlulileyo, abakhweli baseLufthansa banokuba nakho ukufumana iinqwelo moya ze'Trachten 'kukhetho lweendlela zaseYurophu ezisuka eMunich. NgoSeptemba nango-Okthobha, abasebenzi beLufthansa CityLine bazakutshintsha iyunifomu yabo ngenxa yeengoma. Iindawo abaya kuzo ngenqwelomoya yiAmsterdam, iLyon, iGdansk, iMilan, iSofia, iBrussels, iAncona, iBelgrade, iWarsaw, iCologne neMünster.
Kubasebenzi benkxaso yabakhweli bakaLufthansa kwiTheminali yesi-2 yaseMunich, ibisisithethe seminyaka ngoku ukwamkela abakhweli kwisinxibo sendabuko ngexesha le-Oktoberfest. Ukongeza kwiyunifomu yaseLufthansa, amanenekazi anokunxiba ii-dirndls kwaye amanene anganxiba iisuti zemveli zeTrachten.
Oktoberfest kwigumbi lokuphumla laseLufthansa
IiLounges zaseMunich zeLufthansa nazo zilungiselelwe iOktoberfest. Kwiindawo zokuphumla ezilishumi elinambini kwiTheminali 2 nakwisakhiwo sesathelayithi, ngaphezulu kwe-4,000 kilograms zeLeberkäs 'ziya kuhanjiswa, kunye ne-pretzels ezingaphezu kwama-38,000 kunye nama-750 eekhilogremu zeesosi zeWeißwurst. Imenyu yalo nyaka ka-Oktoberfest kwindawo yokuhombisa yeLufthansa yokuQala yokuQala iya kuqala ngeFesttagssuppe, isuphu yesiko, elandelwa lidada lamafama kunye nokuvala nge-apple strudel eyenziwe ekhaya enikwa isosi yevanilla, iiamangile ezigcadiweyo kunye neerinki ezifakwe irum. KwiNdlu yeeNdlu yeeNdlu yeeNgwevu kunye nezoShishino, abakhweli bazokonwabela izitya zaseBavaria ezinje ngeLeberkäs ', iFleischpflanzerl inyama yenyama kunye nequark mousse eneplum